Ny ankizivavy dia niezaka foana mba hamiratra zavatra mamirapiratra. Fanangonam-bola goavana, akanjo vita amin'ny rivotra, kitapo miaraka amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy volamena - izany rehetra izany dia mahasarika ny fon'ny vehivavy amin'ny fahitana voalohany. Tsy nandalo sy lamaody tamin'ny kiraro. Amin'ny ankapobeny dia maneho karazana kiraro marobe, voaravaka amin'ny zipo-piraisankina, ireo bokotra miloko sy ny rivotra mena. Fa ny tena mahafinaritra indrindra dia ny kiraro misy string. Eo amin'ny kiran'ny vato palmie no mijery kokoa ara-boajanahary, tsy misy kiraro maranitra.
Karazana kiraro fanoratana
Ny mpanamboatra maoderina dia manamboatra kiraro amin'ny karazam-pandrefesana isan-karazany, izany hoe:
vita amin'ny metaly vy.
Ny tsirairay amin'ireto firavaka ireto dia manome ny kiraro ho an'ny sehatra sasany. Noho izany, ny akorandriaka metallika dia manana ny toetran'ilay rock mpikomy, ary ny kristaly ny vera, mifanohitra amin'izany, dia mamelom-panantenana sy mahavariana. Mividy kiraro amin'ny hariva amin'ny akanjobe, mila mandalina amim-pitandremana azy ireo ianao. Tandremo ny fomba fanangonana sy ny vato rehetra eo amin'ny toerany. Raha toa ka nanjavona ny iray, dia misy ny fahafaha-miandry ny hafa miandry an'io tranga mampalahelo io. Tsara kokoa ny mandà kiraro toy izany amin'ny vato rongony.
Matetika ny mpanakanto maoderina mampiasa kiraro amin'ny famolavolana kiraro. Noho izany, ny kristiana Louboutin dia miteraka kiraro amin'ny tongotra amoron-drakitra eo amin'ny sehatra saika amin'ny fitambarana. Ankehitriny, ny andian-dahatsoratra dia ahitana kofehy manga, mavokely, mavokely ary kiraro beige miaraka amin'ny akanjom-bozaka novokarin'ny Christian Louboutin.
Na dia hita fa tena mendri-piderana aza io akanjo io, dia miafara amin'ny loza ho an'ny zazavavy izy. Ho an'ny kiraro toy izany dia misy fetra maromaro amin'ny akanjo fitafy. Noho izany, tsy afaka miasa amin'ny asany izy ireo, ary amin'ny antoandro dia maniry ny hampihenana ny isan'ireo vato fototra ho farafahakeliny. Tsy afaka mamela ny fikarohana amin'ny firavaka sy paillettes amin'ny akanjo, raha tsy izany dia ho tahaka ny garlanda vaovao ianao.
Ireo kiraro manana fikarakarana be dia be dia be amin'ny sary manaraka:
Wedding. Miaraka amin'ny akanjo sy kavina malefaka, ny kiraro marika fotsy amin'ny akora dia hahatalanjona! Tandremo ny mahazatra ny kiraro, satria ho eo aminao ireo kiraro ireo isan'andro, ka tokony hipetraka tsara.
Ny kintan'ny antoko. Ho an'ity tranga ity dia tsara ny kiraro amin'ny stilettos . Fenoy ny satroka miaraka amin'ny jeans mainty sy lamaody lamaody, na mametraha ny saina manontolo.
Liona tsy manam-pahaizana. Te-hiditra ao amin'ny teatra ve ianao na amin'ny fampisehoana lamaody? Amin'ity tranga ity, mila mijery milamina ianao, ka ny sary dia tsy maintsy saintsainina tsara. Mifidiana kiraro mainty miaraka amin'ny akora amin'ny tongotra. Hanampy ny endriky ny pikantsary izy ireo ary hifanaraka tanteraka amin'ny foto-kevitr'ilay hetsika.
Uggs misy vato sy vato
Sarom-borona maromaro - sary 80 misy lamaody miaraka amin'ny akanjo maromaro
Dress long, short, front
Miakanjo miaraka amin'ny rongony
Garter ho an'ny kofehy
Ny tsindry iraisam-pirenena amin'ny zaza
Miramistin - torolàlana ho an'ny bevohoka
Kisoa ho an'ny mayonnaise ho an'ny sigara
Ny haingo indrindra lamaody ho an'ny volo mainty 2015
Sakafo misy tongolobe
Sary mampiavaka ny mponin'i Siberia
Meningitis amin'ny ankizy
Bulgur - karazam-boninkazo, ahoana no fomba handrahoana sakafo ara-tsakafo sy haingo avy aminy?
Akanjo manga amin'ny fehikibo mena
Ahoana no ahafahan'ny lehilahy iray mihazakazaka manaraka ny tenany?
Pompako potato miaraka amin'ny hena manify
Euharis - fikarakarana tokantrano
Karazana toetra ao amin'ny psikology
Ny maherifon'i Ben Stiller sy ny mpanjifa antsoina hoe Kiehl dia miantso ny mpanjifa ho tsara tarehy
Ahoana ny fandoroana ny afon-tsakafon'ny alikaola?